China Distillation Equipment ụlọ ọrụ na-emepụta | LYBH
Ihe mkpofu mmanu ahihia ahihia nke ikuku na-eme ka ihe di iche iche di omimi, nke di iche na uzo di iche iche na-adabere na isi ihe di iche, elu agụụ molekụla distillation technology bụ banyere 350 Ma) ọ na-adabere na ihe dị iche na pụtara free ụzọ molekụla ngagharị nke dị iche iche bekee iji nweta mmiri mmiri-mmiri mmiri nkewa. Freezọ nnwere onwe nke ngagharị molekul na-ezo aka n'ogologo site na ngwugharị dị n'etiti nkwekọrịta abụọ dị n'akụkụ. Mgbe mmanụ ahụ na-ekpo ọkụ, mkpụrụ ndụ dị nro na nke dị arọ nke mmanụ ga-ekpuchi elu mmiri mmiri ma banye gas gas. N'ihi na ụzọ nnwere onwe nke ìhè na irighiri ihe dị iche iche, ụmụ irighiri ihe dị iche iche na-agagharị dị iche iche mgbe ha jubigara ókè site na mmiri mmiri iji nweta nkewa ihe. ihe mgbaru ọsọ nke. Igwe agụụ atomization na-ekpo ọkụ na-agbapụta ọ bụghị nanị na-agba ọsọ oge dị egwu, kamakwa ọ na-eme ka mmanụ dị mma.
1. demụta decompression catalytic pyrolysis technology na ngwaahịa chemical mmịpụta technology.
2. Ejiri ngwa nchekwa gburugburu ebe obibi zuru oke. Dị ka ndị na-ere ọkụ na-ekpochapu ọkụ na ebe a na-ewepụ ájá.
3. Belata oxidation na decomposition nke regenerated isi mmanụ na elu okpomọkụ.
4. Mkpụrụ mmanụ na-enweta mmanụ mkpofu adịghị ihe na-erughị 80%.
5. Arụ ọrụ ahụ dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi, teknụzụ nrụpụta dị elu, ogo nke akpaaka dị elu, na ụlọ ọrụ nchekwa ahụ zuru ezu.
6. Okpomoku nke kpo oku nke mmanu mmanu di ala karie ihe ndi ozo, ya mere o kariri ike.
Usoro usoro ihe osise:
Distillation Equipment Okwu Mmalite:
Njupụta(n'arọ / m³ @ 20 ℃)
Kinosia viscosity(sSt @ 40 ℃)
Uru calorie(MJ / n'arọ)
Ihe ngosi Flash site na usoro Abel (℃)
Ebe Ọkụ (℃)
Waste mmanụ distill ka isi mmanụ / American API lube isi mmanụ nhazi ọkwa ọkọlọtọ
Nke gara aga: Carbon Black egweri akụrụngwa
Osote: Oilsludge Pyrolysis Osisi
Mgbasa System Distillation
Akụrụngwa Ule Distillation
Ngwa akụrụngwa Laboratory
Obere Nnukwu Mmanụ
Ngwongwo Mgbasa Mmanụ
Ngwongwo Ngwunye Petroleum
Plastic Oil Distillation Osisi
Egweri Motor Oil
Taya mmanụ Distillation Osisi
Distillation mmanụ Taya na mmanụ mmanụ dizel
Ihe mkpofu mmanu ahihia
Product Ihe: Mgbe magnetik nkewa na ndinuak, na raw carbon nwa N'ịbụ site n'efu taya pyrolysis na-zigara mgbanwe bin.Mix mmiri na nrapado na a proportionally proportioned agwakọta ite. Carbon nwa na Transition biini na mmiri mmiri na batching tank na-agwakọta evenly na a ụfọdụ hà na mgbe ahụ n'ime granulator maka mgbochi mmiri granulation.Mgbe ẹkụre nke granulation nke carbon ojii n'ime draya maka zuru ihicha mgbe sieving.The oversized akụkụ ...
Imefusị rọba, Imefusị Taya Recycling Machine, Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi, Taya Pyrolysis, Ogbe Pyrolysis Osisi, Plastic imegharị ihe maka iji igwe,